Yohane 2 NA-TWI - Juan 2 NVI | Biblica América Latina
Yohane 2 NA-TWI - Juan 2 NVI
Yesu ma nsu dan nsa
1Ne nnansa so, nnipa bi hyiaa ayeforo wɔ Kana a ɛwɔ Galilea asase so. Yesu ne na kɔɔ saa ayeforohyia no bi. 2 Wɔtoo nsa frɛɛ Yesu ne n’asuafo no nso kɔɔ hɔ bi. 3 Wogu so regye wɔn ani no, ayeforo no ase nsa sae maa Yesu ne na kɔɔ Yesu nkyɛn kɔka kyerɛɛ no se, “Wɔn nsa a wɔrenom no asa.”
4 Yesu ka kyerɛɛ ne na se, “Mprempren de, merentumi nyɛ ho hwee, efisɛ, me bere nnya nnui ɛ.”
5 Ne na ka kyerɛɛ asomfo no se, “Biribiara a ɔbɛka se monyɛ no, monyɛ.”
6 Saa bere no na nsuhina asia sisi hɔ; eyinom mu na na Yudafo de nsu gu de dwira wɔn ho afahyɛ ase. Na asuhina biara tumi fa nsu nkotokyiwa aduonu anaa aduasa. 7 Yesu ka kyerɛɛ asomfo no se, “Monhyehyɛ nhina no ma ma.” Wɔde nsu hyɛɛ no ma ma. 8 Yesu ka kyerɛɛ wɔn se, “Monsaw bi nkɔma onipa a ayeforo no ho ntotoe hyɛ ne nsa no.”
9 Nea ayeforo no ho ntotoe hyɛ ne nsa no kaa nsu no a adan nsa a onnim baabi a efi a asomfo no de, na wonim no hwɛe no, ɔfrɛɛ ayeforokunu no, 10 ka kyerɛɛ no se, “Saa nsa yi yɛ nsa pa. Wonte sɛ afoforo a wɔaka no. Obiara a ɔtow pon de nsa pa di kan ba wɔ n’apontow ase na akyiri yi, ɔde nsa a enni mu aba. Nanso wo de, wode nsa pa no atwa to!”
11 Saa nsɛnkyerɛnne a Yesu yɛe wɔ Kana a ɛwɔ Galilea asase so no ne nsɛnkyerɛnee a edi kan a ɔyɛe wɔ baguam de kyerɛe sɛ ne tumi fi soro. Ɛmaa n’asuafo no nso gyee no dii sɛ, ampa ara, ɔno ne Agyenkwa no. 12 Ayeforohyia no akyi, ɔne ne na ne ne nuanom ne n’asuafo no kodii nna kakra wɔ Kapernaum.
Yesu kɔ asɔredan mu
13 Esiane sɛ na Yudafo Twam Afahyɛ no rebedu no nti, Yesu kɔɔ Yerusalem.
14 Oduu asɔredan no mu hɔ no, ohui sɛ aguadifo bi nso tete wɔn apon akyi resesa sika. 15 Yesu faa ntampehama, yɛɛ no mpire, de pamoo sikasesafo no ne wɔn nguan ne wɔn anantwi no fii asɔredan mu hɔ, kaa wɔn apon gui maa wɔn sika a wɔresesa no nyinaa bɔ pansamee. 16 Afei ɔkɔɔ wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no so ka kyerɛɛ wɔn se, “Monsesaw wɔn mfi ha nkɔ ntɛm! Mommfa m’agya fi nnyɛ aguadibea!”
17 Asuafo no kaee sɛ, wɔakyerɛw wɔ Kyerɛwsɛm no mu se, “Wo fi yiyedi ho dadwene ahyɛ me so.”
18 Afei Yudafo mpanyin no bisaa Yesu se, “Tumi bɛn na wowɔ a enti wopamoo nnipa no? Yɛ nsɛnkyerɛnne bi fa di adanse sɛ Onyankopɔn na ɔmaa wo saa tumi no.”
19 Yesu buaa wɔn se, “Mate nea moaka no. Nsɛnkyerɛnne a mede bedi adanse ara ne sɛ, mummubu asɔredan yi ngu na mede nnansa besi bio.”
20 Yudafo mpanyin no tee asɛm a Yesu kae no, wobisaa no se, “Asɔredan a wɔde mfe aduanan asia sii no, na wode nnansa betumi asi?” 21 Nanso Yesu de, na ɔde ɔno ankasa ne nipadua na ɛreyɛ asɔredan no ho mfataho. 22 Yesu wusɔre no akyi ansa na asuafo no kaee asɛm a ɔkae no. Eyi ma wogyee Kyerɛwsɛm ne nsɛm a Yesu kae no dii.
23 Bere a Twam Afahyɛ no dui a na Yesu wɔ Yerusalem no, nsɛnkyerɛnne ahorow bebree maa nnipa gyee no dii. 24 Nanso, Yesu amfa ne ho anto wɔn so, efisɛ, na onim sɛnea nnipa suban te. 25 Na onhia onipa adanse a obedi afa onipa ho, efisɛ, na onim nea ɛwɔ onipa mu.
NA-TWI : Yohane 2
NVI : Juan 2